कस्तो होला यो साता तपाईको भाग्य ? हेर्नुहोस् राशिफल - Nawalpur Dainik
August 7, 2021 by Nawalpur Dainik
यो सातामा पुरानो र रोकिएको काम दोहोर्याएर गर्दा सफलता मिल्न सक्छ । धर्म कर्म तथा समाज सेवामा मन लाग्नेछ । प्रेम सम्बन्ध र प्रणयप्रसङ्गका लागि श्रेष्ठ समय रहेको छ । मध्य सातामा लगनशीलताको कमीले गर्दा ठूलो उपलब्धि हातपार्न नसकिएला ।
यो सातमा नयाँ काम सुरु गर्ने समय छ । बोलीको प्रभाव पनि बढ्नेछ नयाँ कमको थालनी हुनेछ । कसै सैलाई परदेशी घर फर्कने र घरपरिवारमा र रमाइलो वातावरण मिल्नेछ । मध्य सातामा स्वास्थ्य प्रति सजगता अपनाउन एकदमै जरूरी छ ।
यो हप्ता भाग्यले विभिन्न अवसर जुराउनेछ । अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा सफल रहने योग छ । शेयर बजारमा गरेको लगानीले राम्रो प्रतिफल देला । कलकारखाना र बन्द व्यापारमा फाइदा हुनेछ । साताको अन्त्यमा बोलीको विपरीत अर्थ लाग्न सक्छ ।
यो सातामा नयाँ काम वा रोजगारको अवसर मिल्नेछ । उन्नति एवं प्रगतिको वातावरण बन्नेछ । ढिलै भएपनि अधुरा काम सम्पन्न होला । मित्र वा आफन्तको सहयोगबाट मिल्नेछ । बुधवारबाट कामहरू अधुरै रहलान् । लगानी डुब्ने भय छ सचेत रहनु होला ।
यो सातामा प्रतिष्ठामा दाग लाग्न सक्छ ख्याल गर्नुहोला । अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष गर्नु पर्ला । अपजस मिल्नसक्ने भएकाले सजग रहनुहोला । बुधवारबाट रमाइलो यात्राको योग रहेको छ । वस्त्र, अलङ्कार आदि खरिद गर्ने योग पनि छ ।
एकपछि अर्को अवसर आउनाले मन प्रसन्न रहनेछ । धार्मिक कार्य सफल रहनेछ । प्राविधिक काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । साताको मध्यमा महत्वपूर्ण कार्यमा व्यवधान आउने देखिन्छ । प्रेम प्रसङ्गमा समेत नरमाइलोपन आउने छ ।
यो साता मान प्रतिष्ठामा वृद्धि होला । धार्मिक, सामाजिक महत्त्वको क्षेत्रमा भ्रमण हुन सक्छ । रोकिएका काम पुनः सुरु हुन सक्छ । सरकारी जागिरेले बढुवा, प्रशंसा र पुरस्कार पाउनेछन् । धर्म कर्म तथा समाजसेवामा मन लाग्नेछ ।
यो साता शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ । टाढा रहेका आफन्तसँग प्रविधि मार्फत भेटघाट हुनेछ । धन सञ्चयको अवसर प्राप्त हुनेछ र हराएको आत्मविश्वास जाग्नेछ । कसैलाई सापटी दिएको रकम फिर्ता मिल्न सक्छ । रमाइलो यात्रा पनि हुनेछ ।
यो सातामा गरेको कार्यमा अवरोध आउला । तर्क, विवाद र प्रतिस्पर्धाबाट टाढै रहनु होला । मनमा दबाब र तनाव बढेको महसुस हुनेछ । साताको अन्त्यबाट न्यायिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । पुँजीबजारको क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ ।
यो साता सामाजिक र राजनैतिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । नयाँ सवारी साधन प्राप्तिको योग छ । गरेको काममा सफलता हात पर्नेछ । पार्टनरसिपमा गरिएको कारोबारले राम्रै फाइदा दिनेछ । लगानी डुब्ने भय छ सचेत रहनु होला ।
यो सातामा शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ । मान्यजनको सहयोग प्राप्त हुनेछ । धार्मिक गतिविधिमा संलग्न हुने अवसर मिल्नेछ । साताको अन्त्यमा विपरीत वर्ग प्रति आकर्षण बढ्नेछ । आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष पनि गर्नु पर्ला ।
यो साता शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ । आफूसँग भएको क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर जुट्ला । परोपकारी कार्यमा संलग्न भइनेछ । धार्मिक र सांस्कृतिक सभासमारोहमा सरिक हुने अवसर मिल्नेछ । रमाइलो यात्रा गर्ने अवसर जुट्न सक्छ । (अधिक जानकारीका लागि 977-9849559502)
Prevसाउन २४ गते आइतबार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल
Nextहे भगवान् ! टिकटकमा निकै नै भाइरल बालकलाई के भयो यस्तो; हेर्नुस् उनका रमाइला टिकटक भिडियो